လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခြင်း လျော့ကျမှုသည် လူပတ် ၀န်းကျင်အသိုင်း အ၀ိုင်းအတွက်ကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်တည်း (၂)
အောကျတိုဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၅:၅၈ ညနေ News Code : 859279 Source : ABNA Link:
လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခြင်း လျော့ကျမှုသည် လူပတ် ၀န်းကျင်အသိုင်း အ၀ိုင်းအတွက်ကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်တည်း (၂) ဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
တရားမ၀င်ဆက်သွယ်မှုများသည် အိမ်ထောင်ပြု၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများ၌ လျော့ကျ၊ ကျဆင်းမှု၏ အဓိက အရေးကြီး အကြောင်းခံ တစ်ခုဖြစ်လေသည်။
အမှန်တကယ် လက်ရှိ လူမှုဘ၀ တည်ဆောက်မှု၊ လူနေမှု ပတ်ဝန်းကျင်၊အသိုင်းအ၀ိုင်း အများနှင့် လုပ်ရမည့်ဘ၀၏ မြောက်မြားစွာသော အစိတ်အပိုင်းများသည် သဘောသဘာဝနှင့် စစ်မှန်သည့် ဘ၀ မဟုတ် တော့ချေ။ (ပြောင်းလဲသွားလေပြီ။)
၄င်းတို့အနက်မှ နမူနာသာဓကတစ်ခုမှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု အလွန်တရာ ကျဆင်းလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် လူငယ်လူရွယ် များအနေဖြင့် သဘာဝ နှင့် ဆန့် ကျင်သည့် ဘ၀ ( လူပျို လူလွတ်၊ အိမ်တောင်မရှိသည့် ဘ၀) ကို အလေးပေးလာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
လက်ထပ် ထိမ်းမြားမှု၊ မင်္ဂလာဆောင်မှု လျော့ကျခြင်း၊ နည်းပါးခြင်း နှင့် လူပျိုလူလွတ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်မဲ့သူ များပြားကျယ်ပြန့်လာ သည်နှင့်အမျှ မျိုးဆက်သစ် ဖြစ်ပွားမှုကိုလည်း အဟန့်အတားပြုနေကြောင်း ကျွန်တော် အနေ ဖြင့် အစီရင်ခံရေးသားတင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပေသည်။
(ဤသို့ဖြင့် မနုဿလူသား အနေဖြင့်) မည်သည့်တာဝန်၊ ၀တ္တရားကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ခံစားချက်ပင် မရှိတော့ချေ။ ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ် ဝေးကွာသွားကြလေသည်။ လူအပေါင်းအသင်းများနှင့် စုပေါင်း၍ ဘ၀တည်ဆောက်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နေထိုင်မှုကို ဥပေက္ခာပြု မထေမဲ့မြင် မြင်ပြုလာကြလေသည်။ (ဤအချက်အလက်၊ လက္ခဏာများ သည်) အိမ်ထောင်မရှိသည့် လူပျိုလူလွတ်များ၏ဘ၀၌ လုံးဝတွေ့ရသည့် လက္ခဏာများပင်တည်း။
လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် ကြီးမားသော ရောဂါ ပြဿနာ တစ်ခုဖြစ်ပေ သည်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသူ လူပျို၊ လူလွတ်အများဆုံး ကျူးလွန်နေသည့် စာရိတ္တချို့ယွင်းပျက်ပြား ပျက်စီးမှု များ၊ မကောင်းမှုများ ဆွေးနွေးမှုတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြမည်ဆိုလျှင် ဤလူမှုရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်း ပြဿနာများ အရေးကြီးမှု ပိုမို၍ ထင်ရှား သွားပေမည်။
လက်ရှိ လက်တလော စာရှုသူ လူကြီးမင်း အပေါင်းတို့အား လူမှု ပတ် ၀န်းကျင်အတွက် အန္တရာယ် ပြဿနာကို ဖြစ်စေသည့် အခြေခံ အကြောင်း တရားများ ဖက်သို့ မီးမောင်းထိုးတင်ပြပါမည်။
ဤအန္တာရာယ် ပြဿနာ အကြောင်းခံများမှာ တစ်ခုနှစ်ခုတည်း ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မဟုတ်သည့် ဆိုသည့် အချက်မှာ ငြင်းမရအောင် မှန်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းမြောက်မြားစွာသော အခြေခံ အကြောင်းတရားများ၊ အခြားအကြောင်းခံတရားများထက် အလွန်တရာ အရေးပါ အရာရောက်သည့် အကြောင်းခံတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းတစ်ရပ်မှာ (တရားမ၀င် ဆက်သွယ်မှုများ ဖြစ်ပွားလာ ခြင်း) ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းမများ နှင့် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မှု ကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ ဤအတွက်ကြောင့်လည်းမိန်းမများသည် (ယခုခေတ်) လူငယ်လူရွယ်အမြောက်အမြားတို့၏အမြင်၌သိက္ခာမရှိသူ၊တန်ဖိုးမရှိသည့်အရာ၊ယုတ်စွအဆုံး တစ်ခါတစ်လေ “ အလကားရသည့် ပစ္စည်း၊အခမဲ့ရသည့် ပစ္စည်း ” ပမာဖြစ်နေပြီး အလွယ်တကူ နှင့် ဆွတ်ခူးရယူကြလေသည်။
ဤ အတွက်ကြောင့်လည်း အတိတ်က ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း တွင် လူငယ်လူရွယ်များကို ဆွဲဆောင်စိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ၏ တန်ဖိုး၊ အရှက်သိက္ခာ၊ အိနြေ္ဒ၊ အဆင့်အတန်း ပျက်စီးခဲ့ရလေပြီ။ ထို့ပြင် (ဤအဆင့်အတန်းပိုင်ရှင် မလေးများကို) ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကြီးမားသည့် ကြိုးပမ်းမှုနှင့် စတေးမှုကို လူငယ်လူရွယ်များ အနေဖြင့် ပြုခဲ့ရပါသည်။ (သို့သော်) အားလုံး ပျက်စီးရေစုံ မျောသွားရလေပြီ။
ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်၌ အမျိုးသမီးများ၏ မလုံမခြုံ ဟိုပေါ်ဒီပေါ် ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ပေါများလာသည်နှင့် အမျှ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်၊ စာရိတ္တ ပျက်ပြားလာမှုသည်လည်း တိုးပွားလာလေသည်။
အကယ်၍ ဤလုပ်ရပ်အား အစပထမကတည်းက သတိပြုသူ၊ ဂရုပြု သူများ၏ စိတ်ဝင်စား အာရုံထားခြင်းခံရမည်ဆိုလျှင် နောက်ဆုံးရလာဒ် အဖြေမှာရှုပ်ထွေးပွေလီသည့်ပြဿနာများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏တန်းဖိုးကျမှုကိုလျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါသည်။ပြီးနောက်အမျိုးသမီးများ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပေသည်။
ဤ အထောက် အထားကြောင့် အတိတ်ခေတ်ကာလ၌ နေကာဟ် နှင့် အက်ဒ် (တရားဝင် နေကာဟ်ဖြစ်ရန် ရှရီအသ် မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ၀ါကျကို ရွတ်ဆိုခြင်း) တို့၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည့် သန့်ပြန့် သန့်စင် စင်ကြယ်သည့် “အချစ်” “မေတ္တာ” သည် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့် အာနိသင် အစွမ်းမျှ မရှိတော့ချေ။
အကြောင်းသည်ကား - မနုဿ ပုထုဇဉ် လူသားသည် အမြဲတမ်း လွယ်လွယ်နှင့် မရသည့် အရာကိုသာလျှင် တန်ဖိုးထားချစ်ခင်မြတ်နိုး တတ်ကြလေသည်။
အားနည်းသည့် အရာတစ်ခု၊ အလကားအခမဲ့၊ တန်ဖိုးမဲ့သည့် အရာကို မနုဿ လူသားအနေဖြင့် ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိချေ။ ဤအချစ်သည် (အချစ်မီး (ခ) တဏှာမီး) ပင်တည်း။
အခြားတစ်ဖက်၌လည်း မြောက်မြားစွာသော ဒုစရိုက်သမား၊ ကလေကချေ ၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ယဉ်ကျေးမှုမရှိ တဏှာရူးများ အနေဖြင့် ပြောကြားလေသည်။
“ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့၊ ရယူနိုင်ဖို့ ယောင်္ကျား တစ်ယောက်အနေဖြင့် ထောင်ပေါင်း များစွာသော (စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ) ကို လက်ခံပြီး လက်ထပ် ထိမ်းမြားပြီးယူဖို့ ဘာအရေးကြီး လို့လဲ၊ (ဘာအလုပ်ရှုပ်ခံမှာလဲ) တကယ်ဆို ဒီလို စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ တာဝန် ၀တ္တရားတွေကို လက်ခံဖို့ တာဝန်ယူဖို့မလိုဘဲ မိန်းမအမြောက်အမြားကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်…”
ဤကဲ့သို့ပြောရခြင်းမှာဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် လိင်နှင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှု တို့၏ ရလာဒ်အကျိုးဆိုး၊ ဒုက္ခဆိုးများကို မသိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
၄င်းတို့၏အမြင်၌ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးသည် လိင်ပြဿနာ ကိုသာ ဖြေရှင်းပေးသည့် တန်ဆာတစ်ခုတည်းဟု ထင်မြင် နေကြ လေသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ အားလုံးသည် အရူးအလုပ်ဟု သတ်မှတ် ထား ကြလေသည်။
ဤ အတွက်ကြောင့်လည်း ဤ ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘ၀ တစ်ခုလုံး(သို့မဟုတ်) ဘ၀၏ အချိန်တော်တော်များများကို လူပျိုလူလွတ်ဘ၀ ဖြင့် ကုန်စေလေသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်မှန် (တရားမ၀င် ဆက်သွယ်မှုများ လွယ်ကူ ပေါများလာခြင်း) ကို ဂရုပြုမည်ဆိုလျှင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု လျော့နည်း ခြင်း၏ အကြောင်းတရားလုံးဝ ရှင်းလင်းထင်ရှားသွားပေမည်။ ဤ အတွက် ကြောင့် အနောက်တိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မည်သည့်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အကွပ်အထိန်းမျှ မရှိချေ။ ဤကဲ့သို့ (တိရိစ္ဆာန်များနည်းတူ) လွတ်လပ်မှု အမြောက်အမြားကို မြင်နိုင်ပေသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အိမ်ထောင်ပြုထိမ်းမြားခြင်းသည်လည်း အများအပြား နည်းရလေသည်။ အကယ်၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြား အိမ်ထောင်ပြုလျှင်လည်း အသက်ရပြီး အသက်ကြီးမှ ပြုကြလေသည်။ အမှန်တကယ် ဤအသက်ကြီး မှအိမ်ထောင်ပြုခြင်းများ သည်လည်း အရသာသိပ်မရှိတော့ချေ။ ရက်ကြာ ရှည်မခံ တော့ချေ။ ယေဘုယျ အားဖြင့် အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးကို အကြောင်း ပြုပြီး တစ်ခါတစ်ရံ နောက်ရင်း ပြောင်ရင်း ကွဲသွားပြတ်စဲသွား ကြလေသည်။
စာရိတ္တပျက်ပြားမှုနှင့် မကောင်းသည့် နေရာများ၏ရလာဒ်
အထက်ဖော် ပြမှု အပြင် ဤအဖြစ်အပျက်သည်လည်း တင်ပြ သီကုံး သင့်ပေသည်။ လူပျို လူလွတ်ဘ၀ကို အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ထက် ဦးစားပေး အလေးထားသည့် အသိုင်းအ၀ိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အမြဲတမ်း ၄င်းတို့ထံ၌ ညစ်ပတ်ပြီးပုပ်ပွ နေသည့် အနာရှိလေသည်။ (ထိုအနာအား) ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ပြည့်တန်ဆာ များနေရာ ဗဟိုဌာနချုပ်များ “ မြို့သစ် ” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။
ဤ နေရာများသည် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို လျော့ကျပေသည်။ အရေးကြီး အကြောင်းခံတစ်ရပ် ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ သိက္ခာရှိ ဂုဏ်သရေရှိ မိသားစုများ၏ အရှက် ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကျစေ ကွဲစေ လေသည်။
ဤကဲ့သို့သော ညစ်နွမ်း၊ ညစ်ညမ်းသည့် ပြည့်တန်ဆာများ၊ မကောင်းသည့် အမျိုးသမီးများ ကြင်လည်ရာနေရာများကို မကောင်းသည့်၊ မသန့်စင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတိုး၌ တွေ့နိုင်ပေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း သည် ကောင်းသည့်စာရိတ္တ အကျင့်စရိုက် မရှိ ကြောင်း သက်သေထူနေပေသည်။ ကာမပျက်ပြားမှုနှင့် မကောင်းသည့်နေရာ များသည် ပြဿနာများကို ပြန့်ပွားလာခြင်းနှင့် ရုပ်နှင့်နာမ်ကို ရောဂါဖြစ်စေ သည် ဆိုသည့် အချက်လေးဖြစ်စေ မလေ့လာသင့်ချေ။ ထိုနည်းတူစွာ လက်ထပ်မင်္ဂလာကို လျော့ကျစေခြင်းနှင့် လူငယ်လူရွယ်များကို လူပျိုလူလွတ် ဘ၀သို့ ပို့ပေးသည်ဟု သည်အချက်လေးနှင့်လည်း မတင်းတိမ်သင့်ချေ။
အမှန်တကယ် ဤအကြောင်းအရာတချက်ခြင်း အတွက် များများ လေ့လာသင့်ပေသည်။ ထို့ပြင်မကောင်းသည့် နေရာများ၌ မိမိခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ရင်းနှီးလုပ်စားသည့် ပြည့်တန်ဆာမများ အကြောင်း စိစစ်လေ့လာမှုကို အသေအချာ အသေးစိတ် အလေးပေးပြီး လေ့လာစိစစ်သင့်ပေသည်။
ဤအကြောင်းအရာကိစ္စကို အသေးစိတ်လေ့လာပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ ကျယ်ပြန့်လှသည့် သုတေသီ ပြုမှုနှင့်အတူ စာအုပ်များ ရေးသားသီကုံးခဲ့ကြလေသည်။
ဤ ကဲ့သို့သော် မကောင်းသည့် အမျိုးသမီးများမှ တဆင့် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး အန္တရာယ်၊ အကြီးမားဆုံး AIDS ရောဂါကို ဖြစ်စေ၊ကူးစေကြောင်းတညီ တညွတ်တည်း ၀န်ခံရေးသားထားကြလေသည်။
ဤ ကဲ့သို့ မသန့်မိန်းမများ၊ အောက်တန်းကျသည့် မတတ်နိုင်ရှာကြ သည့် မိန်းကလေးများသည် အမြဲတမ်းခေါင်းမှ ခြေအထိ အကြွေးများ၌ နစ်မွန်း နေကြလေသည်။ နေနှင့်ည သူစိမ်း (တရားမ၀င်) ယောင်္ကျားများ၏ လိုအင် ကာမဆန္ဒ နှင့် အရသာကို ဖြည့်တင်းပေးရန် အတွက် ဖယောင်းတိုင်လေးပမာ (မိမိတို့၏ဘ၀ကို) လောင်ကျွမ်းနေစေရလေသည်။
နောက်ဆုံး (မိမိဘ၀အဆုံးခရီးအဖြစ်) အလွန်ဆိုးရွားသည့် အခြေ အနေအဖြစ် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်မခံသည့် ထောင့်တစ်နေရာတွင် သွားရောက်ဘ၀ တည်ဆောက်ပြီး သေဆုံးရလေသည်။ တစ်ခါတစ်လေဆို လျှင်၎င်းပြည့်တန်ဆာမများ၏ အလောင်းကိုပင် မြေမြှုပ်၊ ဒဖ်ှနာပြုပေးမည့်သူ၊ သင်္ဂြုံဟ်ပေးမည့်သူ တစ်ယောက်မျှပင် မတွေ့ရချေ။
မည်သည့် အသိဥာဏ်နှင့် Logic အရ လက်ခံနိုင်ပါ သနည်း?
လူ့အခွင့်အရေး၊ ကျွန်စနစ်ပပျောက်ရေးလို့ ကြွေးကြော်အာမခံ နေသည့် ဤခေတ်ကာလ၌ ကျွန်တော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ မြောက်များစွာ သောကျွန်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ခံစားနေသူများကို မြင်တွေ့ ရနိုင်ပေသည်။ မည်သူမျှ ၄င်းတို့ လွတ်မြောက်ရန် ခြေလှမ်း မလှမ်း ကြချေ။
(ကျွန်စနစ်များမှ တစ်ခုမှာ ပြည့်တန်ဆာ မိန်းမများကို ငွေပေးပြီး အသုံးပြုခြင်း၊ ၄င်းတို့အား ငွေရနိုင်သည့် အခြား သမာအာဇီဝ ကျသည့် အလုပ် များမပေးခြင်း၊ ပြည့်တန်ဆာခန်းများ၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ် များသည် မိန်းကလေး များ ခန္ဓာကိုယ် ရောင်းစားဖို့၊ မိမိအရှက် အင်္ဂါကို လူတကာကို ပေးဖို့ အသင့် ဖြစ်စေပြီး မဏိကာ ဖြစ်သည့် နိုက်ကလပ်များကို ဖွင့်ထားခြင်း စသည်တို့လည်း အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ပေသည်။) (ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
သို့သော် ၀မ်းနည်းစရာ အချက်ပင်တည်း ….. မြောက်များစွာသော ဤကဲ့သို့ မကောင်းသည့် နေရာများကို ယနေ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း များအနေဖြင့် တမင်တကာသိလျှက် တရားဝင် ကိုင်သည့် အခြေအနေထိ တွန်းပို့လက်ခံလိုကချေပြီ။ ဤ အတွက်ကြောင့်လည်း တရားမ၀င် ကာမ ဆက်ဆံမှုများ လွယ်ကူပေါများမှုကို ဖန်တီးပြီးသား ဖြစ်သွားလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်လည်း မကောင်းသည့် အကျင့်ပျက် ပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် အမှိုက်နွံ တွင် နစ်နေသည့် မိန်းကလေးများသည် တရားမ၀င် ရှရီအသ် ကို ဆန့်ကျင်သည့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုများ၏ ရလာဒ်(ဆိုး) အဖြစ် တဆင့်ပြီးတဆင့် ဤမကောင်းသည့် နေရာသို့ ရောက်ရလေတော့သည်။
ဤကဲ့သို့သော အချို့မိန်းကလေးများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို စာအုပ် များ၌ တင်ပြထားလေသည်။ ဤဖြစ်ရပ်မှန်များသည် သံသယမရှိ၊ ချို့ယွင်းချက် မရှိ၊ ၀မ်းနည်းဖွယ်နှင့် ကြောက်လန့်ဖွယ် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရပ် မှန်များပင်တည်း။ ယနေ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း ၏ နဖူးပြင်ရှိ ၊ မကောင်းသည့် အမာရွတ်၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အဖြစ် စာရင်းဝင် သွားလေသည်။ သို့သော် ၀မ်းနည်းစရာအချက်မှာ ဤကိစ္စ ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး စီစစ် ဆွေးနွေးမှု အနည်းငယ်သာရှိပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်လည်း ………. ကျွန်ုပ်တို့နေဖြင့်
- အိမ်ထာင်စု မိသားစုဝင်များကို ပြိုကွဲပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်…
-(မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုလုပ်နေသည့်)ကျွန်များကို ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက် စေရန်…
ဤအထိမ်းအကွပ်မဲ့၊ ကာမဆက်ယှက်မှု ဆက်ခံမှု၊ တရားမ၀င် ဆက်သွယ်မှု ပေါ်များခြင်းကို မလွဲမသွေ တားဆီးပိတ်ပင်ရမည်ဖြစ် ပေသည်။ ဤ တားဆီး ပိတ်ပင်မှု အတွက်လည်း မှန်ကန်ပြီး စည်းစနစ်ရှိသည့် အစီအစဉ် များ၏ အကူအညီမှ အပ မဖြစ်နိုင်ချေ။
ချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော လူငယ်၊ လူရွယ်လေးများ …
အထက်ဖော်ပြပါ အမှန်တရားများကို ဂရုပြုပြီး မိမိကိုယ်တိုင် အတွက် နှင့် သူငယ်ချင်းများ အတွက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန် ပို၍ သတိရှိစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြပါလေ…..
လမ်းလွဲ၊ လမ်းမှား၊ လမ်းချော်အောင် ကောက်ကျစ်ဖျားယောင်းသူ များ ဤကဲ့သို့သော မသန့်ပြန့်သည့် လွတ်လပ်မှုဖက် ဆွဲဆောင်နေသူများ (သူယုတ်မာများ) ၏ စကားကိုနား မယောင်ပါလေနှင့်။ ရှောင်ကြဉ်ကြပါလေ။
အကြင်မည်သူမဆို ဤအခြေအနေနှင့် မကောင်းသည့်နေရာများကို ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် အရေးကြီးသည့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အဖြစ် တင်ပြမည်။ ဤအရာကို အကြောင်းပြုပြီး မကောင်းမှုများနှင့် မကောင်းသည့်နေရာများကို အ၀င်အထွက်မရှိဖို့ဆိုပြီး ဤ (တရားမ၀င် ဆက်ဆံမှု) ကို သန့်စင်သန့်ပြန့်သည့် မိသားစုဝင်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် အလုပ်၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များ၏ ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေသည်ဟု ဆို၍ ဤဒုစရိုက် အလုပ်အား အမည်ကောင်းပေးမည်ဆိုလျှင် ကြီးမားသည့် အမှားကို ပြုနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဤမကောင်းမှု၊ ရွံစရာ၊ ရှက်စရာ (ကာမဆက်ဆံမှု) ကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်း၌ မြောက်များစွာသော စာရိတ္တပျက်ပြားမှု၊ ချို့ယွင်းမှု များကို ပြန့်ပွား နေစေပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ကိုပါ ရောဂါ ဝေဒနာ မဖြစ်စေပါ သလော?
ဤအထောက်အထားအတွက်ကြောင့်ပင် ဤမကောင်းမှုကို ပတ်ဝန်း ကျင်နှင့် ဝေးဝေးထားကြလေသည်။ ၄င်းအကျဉ်းထောင် (မကောင်းမှု၊ ကာမ ဆက်ဆံမှုအား) တံတိုင်းမြင့်များ လေးဖက်လေးတန် ထူထောင်ပြီး ဤ မကောင်းဆိုးကျိုး အားနိသင်အား အိမ်ထောင်စု၊ မိသားစု အတွင်း မရောက် လာကြစေရန်၊ မကူးစက်လာစေရန် တားမြစ်နိုင်ပေသည်။
လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အရေးကြီးလိုအပ်မှု တစ်ခုအသွင် အဖြစ် ထိုမသန့် မကောင်းသည့် နေရာများကို အ၀င်အထွက် ပြုခြင်းဖြင့် (ရုပ်နှင့်နာမ်) သာယာငြိမ်းမြေ့မှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား?